တတိယအကြိမ်မြောက် Climate Change Reporting သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ထပ်မံကျင်းပ။ | Myanmar Journalism Institute
တတိယအကြိမ်မြောက် Climate Change Reporting သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ထပ်မံကျင်းပ။
This is the Third Climate Change Reporting Training sponsored by UN-Habitat and organized by Myanmar Journalism Institute.7trainees from different media houses participated in this training. The fourth one will be held on May 1st to 5th at Mawlamyine.
UN-Habitat ၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုဖြင့် မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မှ တတိယ အကြိမ်မြောက် Climate Change Reporting သင်တန်းကို မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံရုံးတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မီဒီယာ တိုက် အသီးသီး မှ သင်တန်းသား ၇ ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းကို ၅ ရက်တိုင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ သင်တန်းကို မေလ ၁ ရက်နေ့မှ ၅ ရက်နေ့အထိ မော်လမြိုင်မြို့တွင် ထပ်မံပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားလိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ပါ Link တွင် ၀င်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted in အဖွင့်စာမျက်နှာ on March 20, 2017 by Junior Joseph.	Post navigation
← သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုကို မတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်။
တတိယအကြိမ်မြောက် Climate Change Reporting ကို မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး။ →
Recent Posts	ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Climate Change Reporting သင်တန်းကို မန္တလေးမြို့ တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပ
Myanmar Journalism Institute was mentioned in Columbia Journalism Review
တတိယအကြိမ်မြောက် Climate Change Reporting ကို မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး။
Recent Commentsuwin kyi on သတင်းထုတ်ပြန်ချက်uwin kyi on သတင်းထုတ်ပြန်ချက်Mr WordPress on သတင်းထုတ်ပြန်ချက်saintdo on Post With Left Sidebarsaintdo on Post With Both SidebarCategories	ARTICLES OF THE ASSOCIATION